Sawiro Faahfaahin Laga Helayo Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Kaabuul Ka Dhacday. – Calamada.com
Sawiro Faahfaahin Laga Helayo Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Kaabuul Ka Dhacday.
calamada June 20, 2016 2 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Kaabul ee dalka Afghanistan ayaa sheegaya inuu sii kordhaya khasaaraha ka dhashay camaliyad Istish-haadiyo ah oo lala beegsaday gaari ay la socdeen xubno gaala ajanbi ah.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Dalka Afghanistan ayaa sheegtay in 7 Askari oo ka tirsanaa ilaalada Shirkad gaar ah oo ka shaqeysa xagga ammaanka, islamarkaana u dhashay dalka Nepal inay ku dhinteen Weerar Qarax ah oo Saakay aroortii lala beegsaday gaari bas ah oo ay la socdeen xilli uu marayay bartamaha magaalada Kaabuul.
Goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen Meydad laga soo dhex saarayo gaariga. Illaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay Weerarkaas. Wariyeyaal ku sugan magaalada Kaabuul ayaa ku warramay in inkabadan labaatan gaari oo nooca Ambalunce-ka ah inay gaareen goobta uu qaraxu ka dhacay, kuwaas oo soo daabulay Meydad iyo dhaawacyo.
Sarkaal Booliiska ka tirsan ayaa sheegay in Weerarka uu fuliyay ruux Istish-haadi ah oo gaari Miineysan ku dhuftay Baskii ay la socdeen Shaqaalaha Ammaanka, isagoona sheegay in illaa iyo hadda uusan ka war heyn tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarka, balse wuxuu tilmaamay inuu kacabsi qabo in khasaaraha uu aad u badan yahay.
Wariye u shaqeeya Wakaaladda Wararka ee Faransiiska ayaa isna sheegay in gaariga baska ah ee weerarka lagu qaaday inay la socdeen Askar u dhalatay Dalka Nepal oo u shaqeeya Shirkad gaar loo leeyahay oo reer galbeed ah, wuxuuna xusay in Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kaabuul ay sidoo kale u shaqeeyaan tiro aad badan oo Shaqaale ah oo u dhashay Dalka Nepal ee dhaca Qaaradda Asia.
Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa inta badan sheegata Masâ€™uuliyadda howl-gallada iyo noocaan oo kale ah ee ka dhaca magaalada Kaabuul ee Caasimadda Dalka Afghanistan, iyadoona weerarkani uu kusoo beegmayo xillii Mujaahidiintu ay mudooyinkii lasoo dhaafay sii xoojiyeen howl-gallada kala duwan ee ay ka fuliyaan magaaladaasi.
Hoos Ka Daawo Sawirada Camaliyada Ka Dhacday Kaabul.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 15-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 16-09-1437 Hijri.